साउन २५ भित्रै भरतपुरले मेयर पाउने ,वडा १९ को २० गते चुनाव | चितवन पोष्ट
गृह » साउन २५ भित्रै भरतपुरले मेयर पाउने ,वडा १९ को २० गते चुनाव
भरतपुर । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेपछि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा साउन २० गते पुनः निर्वाचनको लागि मिति तोकिएको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार सर्वदलीय बैठक राखेर पुनः निर्वाचनको मिति तोकेको हो । मिति तोकिएसँगै मंगलबारबाटै शून्य समय सुरू भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत गम्भीर घिमिरेले जानकारी दिए । शून्य समय सुरू भएपछि उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचारप्रसारका कुनै गतिविधिहरु गर्न पाउने छैनन् ।
भरतपुर १९ नम्बर वडाका मतदाताहरुले साउन २० गते बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म रोजेको उम्मेदवारलाई मत हाल्न पाउने छन् । वैशाख ३१ गते भएको चुनावको वडा नम्बर १९ बाट खसेको मतलाई मंगलबारै जलाइएको छ । ‘२० गते चुनाव भएपछि सबै मतपेटिका तत्काल संकलन गरेर सोही दिनको रातिबाट मतगणना हुन्छ’ सहायक निर्वाचन अधिकृत घिमिरेले भने, ‘१९ गणना सकेपछि २० गणना हुनसक्ने सम्भावना छ । घिमिरेको भनाइअनुसार २० गतेको चुनावपछि ४÷५ दिनमै दुबै वडाको मतगणनाको काम सकिन्छ । कुनै परिघटना नभए साउन २५ गतेभित्रै भरतपुर महानगरले मेयर पाउने बलियो सम्भावना रहेको छ । ‘मतगणनामा पहिलेको जस्तो (मतपत्र च्यात्ने) घटना नहोस् भनेर हामी निकै सतर्क अपनाउँछौँ’ घिमिरेले भने ।
वडा नम्बर १९ मा ३ वटा मतदान स्थल र ६ वटा मतदान केन्द्र छन् । उक्त वडामा ३ हजार ७९७ मतदाता छन् । बैशाख ३१ गतेको चुनावमा यस वडाबाट २ हजार ८८७ मत खसेको थियो । अब २० गतेको चुनावमा कति मत खस्ला र कसको पल्ला भारी होला ! त्यहाँका जनता नै जनार्दन हुन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यलय भरतपुरका प्रमुख हरिप्रसाद ढकालले सबै प्रक्रिया पुरानै हुने र नयाँ कुनै नियम लागू नहुने बताए । उनले भने, ‘मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पुरानै कायम हुनेछ, कुनै थपघट हुँदैन ।’
कसको होला पल्ला भारी ?
भरतपुर महानगरमा २७ वटा वडाको मतगणना भइसकेको छ । वडा नम्बर २० को गणना हुन बाँकी नै छ । १९ नम्बरको चुनाव फेरि हुने भएपछि त्यहाँ कसको पल्ला भारी होला भन्ने कौतुहलता सर्वत्र छ । अबको चुनावमा कसको पल्ला भारी होला भन्ने विषयमा दलहरुको आ–आफ्नै दावी छ । २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको अन्तिम नतिजाअनुसार भरतपुरमा एमालेका मेयरका उमेदवार देवी ज्ञवालीको ४० हजार ९८० मत रहेको छ । गठबन्धन उम्मेदवार रेणु दाहालले ४० हजार १९४ मत छ । वडा १९ को चुनाव हुनै बाँकी छ । वडा २० मतगणना बाँकी छ । २७ वडाको नतिजाअनुसार एमालेका देवी ज्ञवाली रेणुभन्दा ७८४ मतले अगाडि छन् । त्यसैले बाजी कसले मार्ला भन्ने अनुमान गर्न ज्यादै कठिन छ । अर्को रोचक पक्ष साढे दुई महिनादेखि मतपेटिकामा थन्केर बसेको भरतपुर वडा नं २० मा ३ हजार ३१८ मत खसेको छ । यस वडाको मत कसको पक्षमा बढी छ ? भन्ने उत्सुकता सबैमा छ । ४ हजार ३३१ मतदाता रहेको उक्त वडामा कांग्रेस बलियो रहेको बताइन्छ । उक्त वडामा देवी वा रेणु मध्ये कांग्रेसले
कसलाई मत बढी दिएको होला ? दलहरुको आ–आफ्नै दावी
नेकपा एमाले चितवनका उपाध्यक्ष तेजेन्द्र खड्काले मतपत्र च्यात्ने पार्टीलाई वडा नम्बर १९ का जनताले कुनै हालतमा मत नहाल्ने दावी गरे । उनले भने, ‘एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई सर्वोच्च अदालतले समेत अन्याय गरेको छ, वडा १९ का मतदाताले न्याय दिन्छन् भन्ने पूरा विश्वास छ ।’ पहिलेको चुनावभन्दा धेरै नै मतले एमाले अगाडि हुने उनले दावी गरे । ‘मतपत्र च्यातेर जित्ने प्रपञ्चलाई वडा नम्बर १९ का जनताले बुझेका छन्, हिजो प्रतिस्पर्धीको हाराहारीमा मत आएको थियो, अब त्यो भन्दा बढी आउँछ’ खड्काले भने । माओवादी केन्द्रका पार्टी सचिवालय सदस्य नारायण दाहालले वडा नम्बर १९ मा गठबन्धन उम्मेदवार रेणुले भारी मतले जित्ने दावी गरे । उनले भने, ‘पहिलो चुनावमा कांग्रेसबाट जति मत आउनुपर्ने हो, त्यति नआएको हो । अब त्यस्तो हुँदैन । अब कांग्रेसबाट जति मत आउनुपर्ने हो, त्यसमा ९५ प्रतिशत मत आउँछ ।’ उनले वडा नम्बर १९ का जनताले एमालेको धाँधली राम्रोसँग बुझेका हुनाले रेणुलाई सर्लक्कै मत आउने दावी गरे । ‘वडा नम्बर १९ को अबको मतले प्रतिस्पर्धी एमालेको उम्मेदवारको अग्रता सबै तिरेर कम्तीमा ५०० मतले गठबन्धन उम्मेदवार रेणु अगाडि हुन्छिन्’ दाहालले भने, ‘वडा नम्बर १९ मा हामीले वडाध्यक्षसहित ५ जना उम्मेदवारमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्छौ र कांग्रेसले मेयरमा हामीलाई सहयोग गर्छ ।’
लखेट्ने निर्देशनको विरोध
भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनास्थलमा समाचार संकलन र तस्बिर खिच्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई सुरक्षाकर्मी लगाएर लखेट्न निर्देशन दिने जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेको कार्यशैलीको नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखा घोर निन्दा गर्दछ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले चितवनमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै मिडियामैत्री नभएको महसुस सञ्चारकर्मीले गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा जिल्ला स्थित प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयले साउन २० गते लाई पुन मतदान गराउने निर्णय लिई वैशाख ३१ गते खसेको वडा नम्बर १९ को सम्पूर्ण मतपत्रलाई मतगणनास्थल परिसरमा जलाएको छ । सो वडाका गनिसकेका र गन्न बाँकी सदर र बदर सबै मतपत्र निर्वाचन प्रक्रियाकै रुपमा जलाइएको थियो । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले समाचार संकलनमा रोक लगाएको घटनाले नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष राधेश्याम खतिवडाले बताए । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सवै जनताको अत्यन्त चासोको विषयका रुपमा रहेको भरतपुर महानगर पालिका वडा नम्वर १९ को निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी ढंगले अघि बढाई जनताको सुचना पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिदिन सरोकारवालाहरु माग गरिएको छ ।
नारायणगढका सुन पसलको ठगी धन्दा, तराजु ठीक, शुद्धता कम